Izindaba - Izici zensimbi ekhanyayo yensimbi nokwakhiwa kwesistimu
Isakhiwo se-aluminium-zinc alloy yensimbi yensimbi eyenziwe nge-aluminium-zinc sakhiwe nge-55% aluminium, i-43.4% zinc ne-1.6% yesilicon eqiniswe ku-600℃. Isakhiwo sonke sakhiwe nge-aluminium-iron-silica-zinc, sakha i-crystal eminyene enezinto ezine, ngaleyo ndlela yakhe ungqimba lomgoqo oqinile futhi osebenzayo ukuvimbela izinto zokugqwala ukuthi zingangeni.
Izici zensimbi ekhanyayo
1. Corrosion ukumelana
Ukumelana nokugqwala kwama- “55% aluminium-zinc coils” kuqhamuka ekuvikelweni kwesithiyo se-aluminium kanye nokuvikelwa komhlatshelo kwe-zinc.Lapho i-zinc ihlatshelwa ukuvikela imiphetho esikiwe, ukuklwebheka, kanye nokuklwebheka kwengubo, i-aluminium yakha ungqimba lwe-oxide olungancibiliki Amakhoyili wensimbi ye-Aluminium-zinc alloy ahlolwe ekuhlolweni kwangaphandle iminyaka engaphezu kwengu-20 ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene zomkhathi, futhi kufakazelwe ukuthi amakhoyili wensimbi angama-55% e-aluminium-zinc anokuvikela okungcono kunokusika kanye nama-5% aluminium-zinc alloy steel coils.
2. Ukumelana nokushisa:
Ukumelana nokushisa kwe-55% ye-aluminium-zinc ingxube yensimbi yensimbi kungcono kunaleyo yensimbi yensimbi ehlanganisiwe, futhi ukumelana nokushisa okuphezulu kwe-oxidation kwe-aluminium plated steel plate kuyafana.I-aluminized zinc alloy steel plate ingasetshenziswa endaweni ephezulu yokushisa kuze kufike ku-315 iziqu.
3. Ukuvumelana nezimo:
Ipuleti lensimbi engu-55% le-aluminium-zinc alloy ine-reflectivity ephezulu, okwenza kube yisithiyo esimelana nokushisa.Amashidi e-zinc aluminized anokucishe kube kabili ukubukeka okushisayo kwamashidi ashubile, ukuze asetshenziswe njengophahla namapaneli ngaphandle kopende ukonga amandla.
4. impahla Paint:
Ngenxa yokunamathela okuhle kakhulu phakathi kongqimba lwe-zinc nopende wensimbi yensimbi ye-aluminized zinc, ingapendwa ngaphandle kokuphathwa kabusha nokwelashwa kwesimo sezulu lapho isetshenziswa njengebhodi lezimpawu ngenhloso ejwayelekile.Ishidi lensimbi lashukumisa lidinga ukwelashwa kwesimo sezulu kanye nokwelashwa kwangaphambili.
Isakhiwo sohlelo lwensimbi ekhanyayoUhlelo lwesakhiwo sodonga lwensimbi olulula, ngogongolo lwensimbi olukhanyayo namakholomu futhi ngokuhambisana nesakhiwo sokugcinwa kwamandla ajwayelekile, izinkomba zokusebenza zomzimba zihle kakhulu, isikhathi sokwakha sifushane, umphumela omuhle wokuvikela, luhlobo olusha lokonga amandla aluhlaza kanye nohlelo lwesakhiwo sokwakhiwa kokuvikelwa kwemvelo.
1. Uhlelo oluyisisekelo
Isisindo sokwakhiwa kwendlu yensimbi ekhanyayo siyakhanya, okucishe kube yi-1/5 yendlu yokhonkolo wesakhiwo sezitini kanye ne-1/8 yendlu yokhonkolo eqinisiwe, ngakho-ke inganciphisa kakhulu izindleko zokwakhiwa kwesisekelo. Isisekelo sendlu yensimbi ekhanyayo ngokuvamile sisebenzisa isisekelo somugqa.
(1) ukukhanya steel isakhiwo ukukhanya isisindo, kungaba kakhulu ukunciphisa izindleko zobunjiniyela eziyisisekelo;
Ukwakhiwa kobufakazi bomswakama wesisekelo kungavimbela ngempumelelo ukuhlasela komswakama namagesi ayingozi;
(3)Imodi yokubopha enengqondo ukuqinisekisa ukuxhumana okuthembekile kwesisekelo nomzimba omkhulu.
2. Wall uhlelo
Uhlelo lwangaphandle lodonga ngokuvamile luphakathi kuka-120-200㎜, ngoba udonga lulula futhi luzacile, indawo yokusetshenziswa yangempela yendlu yensimbi ekhanyayo inyuka cishe ngo-10% -15% kunendlu yendabuko, indawo yokusetshenziswa yasendlini inyuka ngaphezu kuka-90% kunendlu yendabuko, isikhala sangaphakathi Ipayipi lingahlelwa odongeni, phansi nasophahleni izingxenye ezigcinwe izimbobo, ukufihla kuhle, kuhle kakhulu.
(1)Udonga lugcwele ukotini wengilazi yefayibha, enokusebenza okuhle kokulondolozwa kokushisa, ukufudumeza ukushisa nokufaka umsindo
(2) iphepha eliphefumulayo alinamanzi futhi liyaphefumula, elingakwazi ukulungisa ngempumelelo umswakama womoya wasendlini, lenze abaphilayo likhululeke ngokwengeziwe, futhi livimbele ukuzalanisa isikhunta ngaphakathi kodonga;
Ipayipi lingcwatshwe odongeni futhi alihlali ngaphakathi.
3. Uhlelo lwesitezi
Iphansi lenziwe ngamalungu wensimbi ekhanyisa ngamandla ashisayo ashisa kakhulu. Imishayo yaphansi ihlelwe ngokuhambisana nemodyuli ejwayelekile nezimbambo zokulinganisa ezilinganayo. Imishayo yaphansi imbozwe izingcwecwe zesakhiwo eziqinisekisa umswakama futhi ezinqanda ukonakala, zakha uhlelo lokuqina lokuzamazama komhlaba oluqinile.
(1) Isakhiwo sepuleti nensimbi yaphansi yensimbi ihlanganiswe isakhiwo, siqinile futhi sizinzile;
(2) zonke izinhlobo zamapayipi amanzi nogesi zifihliwe esakhiweni saphansi futhi azihlali kubude besakhiwo;
(3) Ikotini lengilazi yefayibha ligcwele i-interlayer, futhi umphumela wokulondolozwa kokushisa nokufakwa kokushisa, ukumuncwa komsindo nokufakwa komsindo kuyamangalisa.
4. Roof uhlelo
Roof truss yakhiwa ezihlukahlukene izingxenye ukukhanya lensimbi. Ngokuvamile, kune-truss engunxantathu kanye ne-T-shaped truss, engakwazi ukufeza kalula futhi ngokuvumelana nezimo izinhlobonhlobo zezakhiwo zophahla eziyinkimbinkimbi. Ngokuvamile, uphahla lwenziwe ngamathayili e-asphalt anemibala, anokusebenza okuhle okungangenisi manzi futhi aqhakambisa ubuhle nekhwalithi.
(1) Uphahla oluyinhlanganisela lunemisebenzi yobufakazi bemvula, ukumelana nesimo sezulu, ukufudumeza ukushisa, njll, okungafinyelela izinhlobonhlobo ezicebile zokumodela;
Umoya kwegazi design, njalo gcina umoya fresh.
5. Izakhi zesakhiwo
Zonke izingxenye zokwakhiwa zenziwe ngensimbi ephakeme ehlanganisiwe ukuqinisekisa impilo yenkonzo yendlu.Zonke izingxenye zesakhiwo zicindezelwa umugqa womhlangano womshini wasefektri, futhi ukunemba kobukhulu kuyimitha elingu-millimeter, elingenakuqhathaniswa nezinye izakhiwo.